ရေကြောင်းပညာရေးစနစ် (Marine Engineering ) ကို..ဝေဖန်နေသူများ..ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်..။ ~ MSU Portal
ရေကြောင်းပညာရေးစနစ် (Marine Engineering ) ကို..ဝေဖန်နေသူများ..ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်..။
9/21/2013 01:55:00 AM MYANMAR SEAMEN UNION2comments
(၂) ဆရာတွေက..ကြယ်ငါးပွင့်ကလူတွေ..သဘောင်္တွေကလည်း..အဟောင်းအစုတ်တွေ..သူတို့က..သိပ်ခေတ်မမှီတော့ဘူး..။ ကျွန်တော်တို့..က..ကိုယ်စီးလာခဲ့တဲ့.အဆင့်မြင့်သဘောင်္ကြီး..အကြောင်းနဲ့..ဖြေလိုက်တော့..Examiner ရှက်ပြီး..ကျွန်တော်တို့ကို..စာမေးပွဲချလိုက်တာ..။
DMA နဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေ..ရိုက်စားလုပ်နေတာ...
အဲဒီစကားက..မကြာခဏ..ကြားရသလို..ကြားရတိုင်းလည်း..ပြောနေသူများ..ကို..သနားပြီး.ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်...၀မ်းနည်းစိတ်ဝင်မိပါတယ်..။ ငါတို့..Professional တော့..သွားတော့မယ်..ဆိုပြီး..။
3E,CE Exam တွေဟာ..
ဆိုကြပါစို့..3E Oral ဟာ..၊
ဒီစာမေးပွဲဝင်ဖြေတဲ့..Candidate ဟာ..3E တစ်ယောက်မှာ..သိသင့်တဲ့..သိရမဲ့.. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ၊ တာဝန်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ..တွေကို..၊ သိလား..မသိဘူးလား..မေးတာပါ..။
သူဖြေနေရတဲ့..စာမေးပွဲ ရဲ့..အနေအထား..၊ သဘောသဘာဝ..ကို..သူ..မသိပါဘူး..။
Professional Certificate ရဘို့..ဖြေနေရတာပါ..။
တစ်ခါမှ..မလုပ်ဘူးတဲ့..သဘောင်္ပေါ်တက်ပြီး...တစ်ခါမှ..မမြင်ဘူးတဲ့..အင်၈ျင်တွေ..အဲယားကွန်ပရက်ဆာတွေကို..Major Overhaul လုပ်ရမှာပါ..။
Examiner တွေဟာ.Five Star ထွက်တွေပါ..။ Foreign Going Vessel တွေမှာ..Chief Engineer လုပ်နေကြတဲ့သူတွေပါ..။ On loan ထွက်ထားဘူးသူများ..ဖြစ်လို့..နိုင်ငံခြား..သဘောင်္ကုမ္ပဏီများမှာလည်း..Chief Engineer အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူး..သူတွေချည်းပါဘဲ..။
အနည်းဆုံးလူက..Sea Service နှစ် (၂၀) ရှိပါတယ်..။
အဲဒီလူက..Sea Service (9)လ ရှိသူကို..စစ်တာပါ..။ တစ်ယောက်ထည်းမဟုတ်ပါဘူး..(၂) ယောက်စစ်တာပါ..။
ဟိုး..အပေါ်ကနေ..Pressure ပေးပါတယ်..။ သူတို့..သားများ..တူများကို..နသားပါရ..အအောင်ပေးခိုင်းတတ်..ပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ..ရုံးစာရွက်ကြီးပေါ်မှာ..ကွန်ပျူတာ..စာစီ..အောက်မှာလည်း..တံဆိပ်တုံးကြီး..ရိုက်ပြီးတော့..အကူအညီတောင်းခြင်း..မျိုးတွေတောင်..ရှိပါတယ်..။
ရေးဖြေ..Answer Paper တွေကို..၃နှစ်သိမ်းထားရပါတယ်..။ IMO, EU, IMO Member States အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက. Audit တွေ..စစ်ချင်ရင်စစ်နိုင်အောင်လို့ပါ..။
DMA မှာ..Internal Audit ရှိပါတယ်..။ DMA မှာ..International ကလာတဲ့ External Audit ရှိပါတယ်..။
တစ်ခြား..Professional Exam တွေထက်..ပိုပြီး..တင်းတင်းကြပ်ကြပ်.. စည်းစနစ်နဲ့..လုပ်ထားပါတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ်တွေက.3E Oral မှာ..ပထမဦးဆုံး..စစ်တာက..Pressure Gauge, Temperature Gauge တွေ..ဖတ်တတ်ခြင်းရှိမရှိ..စစ်ပါတယ်..။ အဲဒီ..Gauge မှ..မှန်အောင်..မဖတ်တတ်ရင်..အကျပေးပါတယ်..။
စက်ယန္တာရားတွေ..ပုံမှန်အလုပ်..လုပ်မလုပ်..က..ဒီဂိတ်တွေဖတ်တတ်ရပါ့မယ်..။ ကိုယ့်စက်ရဲ့ Normal Temperature နဲ့ Pressure တန်ဘိုးတွေ..သိရပါ့မယ်..။
ဒါမှ..စက်..က..ပုံမှန်လား..Abnormal လား..သိနိုင်၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာကိုး..။
အခု..ကျတာ..များလာတော့..ဟိုးအပေါ်က..% တွေနည်းတယ်..တင်ပါဦး..။ %.တင်ပါဦးတွေလုပ်တာများလာပါတယ်...။ အခု..Pressure gauge မဖတ်တတ်..သာမိုမီတာ..မဖတ်တတ်သူများလည်း..အောင်တဲ့..အထဲ..ပါကုန်ပါတယ်..။
ဖြေတာညံ့လွန်းလို့..အောင်ပါစေဆိုပြီး..မင်းနောက်ဆုံးစီးခဲ့တဲ့..သဘောင်္ရဲ့ GE ကဘာလဲဆိုတော့..Yanmarတဲ့..။ ကဲ..အဲဒီ Yanmar Engine ရဲ့..LO Pressure ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့..၂၀၀၀..တဲ့..၊ မင်းက..အင်ဂျင်နီယာ..လုပ်မဲ့ကောင်..။
Kg/cm2 , Bar, Psi, Kpa, Mpa အဲဒီထဲက..တစ်ခုခု..ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ..။ ကဲဘာလဲ..ဆိုပြီး..နမိတ်ကော..အကောင်ပါ..ပြရပါတယ်..။
GE LO Pressure inlet က.2000 bar တဲ့..အရပ်ကတို့ရေ...။
Quality Filter မခံဘဲ..လွတ်လွတ်လပ်လပ်..စီးဆင်းစေလိုက်တာ..
Marine Professional ထဲရောက်လာသူ..တစ်ချို့ဟာ..
CoC Exam တွေမှာ..
Quality Filter လည်းခံလိုက်ရော..အကုန်ပိတ်ဆို့ကုန်ပြီး..
3E Bridge Course နဲ့ပါတ်သက်ပြီး..ပေးတဲ့..လမ်းညွှန်ချက်ဟာ. .မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာရေးစနစ်ကို..လာမဲ့..IMO Audit မှာ..မကောင်းတဲ့..ရလာဒ်..ကိုဖြစ်စေမှာပါ..။ White List ကိုထိ..ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့..အလားအလာရှိပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့..ရေကြောင်းပညာရေးစနစ်က..STCW 1978 (1995 ) အရထွက်ထားတဲ့..Model Course 1999 နဲ့သွားခဲ့တာပါ..။
ရေကြောင်းပညာရေးစနစ် STCW နိုင်ငံတစ်ကာကွန်ဗင်းရှင်းကို..၂၀၁၀ မှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့မှာ..ကျင်းပ..ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်.. ။ STCW (2010 Manila Amendment) လို့..ခေါ်ပါတယ်..။ အဲဒီအတွက်..Model Course အသစ်တွေ ထွက်ပါတယ်..။
3E အတွက်ဆို..Model Course 7.04 2013 Edition Draft ထွက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့က..၁၉၉၉ နဲ့ ၂၀၁၃ ကြား..ပြဌာန်းစာအုပ်၊ စာသင်ချိန်၊ ဘာသာရပ်အသစ်တိုးမှု၊ စတာတွေကို..Gap Analysis လုပ်ရပါတယ်..။
IMO ညွှန်ကြားချက်အရ..စနစ်ဟောင်းနဲ့..3E အောင်မြင်ပြီး.. သဘောင်္လိုက်ပြီး..၅နှစ်ပြည့်လို့..CoC လက်မှတ်လဲ..မည့်..သူများ. .တောင်...လက်ရှိရေကြောင်းလောကရဲ့..နည်းပညာပြောင်းလဲမှုနဲ့..ဥပဒေပြောင်းလဲမှုများကို..သိအောင်..Upgrading Course မတက်မနေရ..တက်ရပါ့မယ်..။
IMO အရ..3E စနစ်ဟောင်း..ကျထားသူများဟာ..Bridge Course တက်ပြီးမှ..စနစ်သစ်စာမေးပွဲကို..၀င်ဖြေရပါမယ်..။ စနစ်ဟောင်းသင်ကြားစဉ်က..မပါဝင်တဲ့..Subjects တွေ..ရှိနေပါတယ်..။ အထူးသဖြင့်
Electrical, Electronic, Control Engineering ရယ်..International Maritime Conventions ရယ်ပါ..။ ဒါတွေကို..သင်ရပါ့မယ်..။ ပြီးမှ..ဖြေခွင့်ပြုရပါ့မယ်..။
ဒါပေမဲ..IMO Audit နဲ့ သေချာပေါက်ညိ..မဲ့ကိစ္စပါ..။
ကျွန်တော်..စိတ်မကောင်းပါ..။ သင်တန်းကျောင်းတွေ..ထောအောင်လို့..DMA နဲ့..သင်တန်းကျောင်းတွေ..ပူးပေါင်းပြီး..ရိုက်စားလုပ်နေပါတယ်..ဆိုတဲ့..တိုင်စာများပါ..ရှိနေမယ်လို့..မှန်းလို့ရပါတယ်..။
ဒါကြောင့်လည်း..Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့..ပြောရရင်..အဲဒီ..Bridge Course က..ဖွင့်သင့်ပါတယ်လို့..။ မဖွင့်ရင်..နောက်ဆက်တွဲ..ပြဿနာများ..လာပါ့မယ်..။လို့..တင်ပြခဲ့ပါတယ်..။
Training Provider တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောရရင်..၊သင်တန်းဖွင့်ချင်လို့.. ဖွင့်သင့်တယ်.ပြောနေတာလို့..အထင်မခံနိုင်တာကြောင့် လည်း..အစည်းအဝေးမှာ..အားလုံးရဲ့..ရှေ့မှာ..ကျွန်တော်တို့တော့..ဖွင့်နိုင်သောအင်အား..မရှိပါလို့..တင်ပြခဲ့ပါတယ်..။
၁၉၈၅ ကျွန်တော်တို့..သဘောင်္တက်တော့..သင်တန်းသိပ်မတက်ရပါ..။ STCW (78)
DMA နဲ့ သင်တန်းကျောင်းတွေရဲ့..ရိုက်စားဇတ်လမ်း..မဟုတ်ပါ..ခင်ဗျာ..။
တိုင်စာ ပေးပို့သော တပည့်များကို....
Aungmya Thein says:
မှန်ပါတယ်ဆရာဦးဝင်းအောင် ရေ သင်တန်းတက်ရင်းဆရာတွေသြဝါဒခြွေရမှာကနိုင်ငံတကာမှာအသိအမှတ်ပြုထားတာကလက်မှတ်ရရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဆင့်သတ်မှတ်အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့နားလည်ထားတာအဲဒါကိုသင်တန်းသားတွေကကိုယ်လုပ်ရမဲ့ deck/rngine /saloom ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှနိုင်ငံတကာကိုထိုးဖေါက်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်ထက်နောက်မျိုးဆက်တွေအမြဲလမ်းကြောင်းပွင့်နေဖို့လောလောလတ်လတ်ဝက်ရွှင်ဖို့ထက်အနာဂတ်မှာဆက်လက်ရွှင်နေဖို့လုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကိုမှာကြားပြီးသင်ခန်းစာများကိုသေသေချာချာပြန်လည်စစ်ဆေးပေးခြင်ထြင့်အရည်အခြင်းမြှင့်တင်ပေးဖို့သင်တန်းမှာသင်တဲ့အခါသိပြီးသားဆိုတာထက်ပြန်လည်ျလ့ကျင့်အဆင့်မြှင့်တင်တဲ့အကြောင်းပြောပြ၍လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ မှားတာပါခဲ့ရင်လည်းစေတနာကြောင့်သာဖြစ်ပါ၍ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါသည် ။ အားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေ။
October 5, 2013 at 5:24 AM Reply